Dawlada Ingiriiska Oo Baadhitaano Xoogle Ku Samaysay Marfash Yada Ay Fadhistaa Somalida Ku Dhaqan Wadankasi | Salaan Media
Dawlada Ingiriiska Oo Baadhitaano Xoogle Ku Samaysay Marfash Yada Ay Fadhistaa Somalida Ku Dhaqan Wadankasi
June 4,2013 London(SM) Booliska dalka Ingiriiska ayaa bilaabay in ay baadhitaan ku sameeyaan goobaha lagu qayilo iyagoo ka cabsi qaba in goobahaas lagu qoro dhalinyaradda noqota mintidiinta.
Wararka ku saabsan badhitaanka lagu samaynaayo goobhaas ayaa sheegaya in ciidamo Boolis ahi ay galeen goobaha lagu qayilo ee loo yaqaan Mafrishka ee ku yaala Xaafadda Woolwich ee Magaaladda London.
Mid ka mid ah labada ruux ee loo haysto dilkii loo geystay askari ka tirsanaa ciidamadda Ingiriiska Michael Adebolajo ayaa la sheegay inuu tegi jiray maqaaxiyadaha lagu qayilo.
Qaadka ayaa waxaa laga isticmaalaa dalka Ingiriiska halka laga mamnuucay wadamo badan oo Yurub kamid ah iyo dalka Maraykanka.
Abukar Cawaale oo ah muwaadin ka soo jeeda qoomiyada Soomaalida ayaa u sheegay jariirada The Mail on Sunday in saraakiil Boolis ahi ay booqdeen dhawr marfrish tan iyo markii la dilay Drummer Lee Rigby.
Cawaale ayaa u sheegay The Mail on Sunday in wadaad la yidhaahdo Abdkadir Mumin uu ku arkay mid ka mid ah marfrishyada lala xidhiidhinayo Adebolajo isagoo la sheekeysanaya dhalinyaro qayileysay.
‘Waxaa joogay illaa labaatan dhalinyaro ah kuwaas oo fadhiday marfrishka kuna qayilaayay, waxaana uu Mumin u sheegayay dhalinyaradan in Britain ay ku guuldareysatay in ay nolol wanaagsan siiso waxaana uu siiyay mid kasta kaadh ay ku qornaayeen cinwaanada lagala soo xidhiidhi karo”ayuu yiri Cawaale.
‘Waxaan aqaan dhalinyaro sidan oo kale loo qoray, waxaana uu mid kamid ah dhalinyaradn oo ku noolaa Xaafadda Woolwich uu soo wacay aabihii oo joogay Cardiff waxaana uu u sheegay inuu joogo xadka Soomaaliya.”ayuu sii raaciyay Cawaale.
Wiilka aabihii waxuu si shakhsi ah u soo wacay Booliska kuwaasoo la xidhiidhay madaxda dalka Kenya oo soo qabtay ninkaas kadibna soo mastaafurisay sida Adebolajo oo kale.